China Abs casing 2000 + cycles ndụ lithium ion batrị 12V 100Ah na BMS Manufacturer and Supplier | LIAO
Abs casing 2000 + cycles ndụ lithium ion batrị 12V 100Ah na BMS
China emeputa 19 inch ogbe arịọnụ 48V 50Ah lithium ion batrị (LiFePO4) maka nkwukọrịta
Tdị mkpọ Bolt ụdị 3.2V 10Ah LiFePO4 batrị batrị maka inye ike na nchekwa nchekwa
Caravan mover batrị LAXpower-1230 12V 30Ah LiFePO4 batrị mkpọ nwere wuru na-chaja na SOC
SOC na aka gụnyere batrị 36V 40Ah LiFePO4 batrị maka skuuta eletriki / ọgba tum tum / ụgbọ ala.
Hot ire multi-ọtọ obere ike ọkọnọ na AC na DC mmepụta
1. The plastic casing 12V 100Ah lithium ion batrị mkpọ maka mmiri ngwa.
2. Ndụ okirikiri: cell lithium ion batrị nwere ike ịnweta, nwere ihe karịrị 2000 cycles nke bụ oge 7 nke batrị acid na-eduga.
Model Nke ENGY-F12100T
Elu igwe 12V
Elu ọnụ 100Ah
Max. na-aga n'ihu ụgwọ ugbu a 100A
Max. na-aga n'ihu na-agbapụta ugbu a 100A
Ndụ okirikiri ≥2000 ugboro
Jụọ okpomọkụ 0 ° C ~ 45 Celsius
Ihapu okpomọkụ -20 ° C ~ 60 Celsius
Nchekwa okpomọkụ -20 ° C ~ 45 Celsius
Ibu ibu 13.5 ± 0.3kg
Akụkụ 342mm * 173mm * 210mm
Ngwa Maka mmiri, ngwa ntinye ike, ect.
3. Light light: Ihe dị ka 1/3 ịdị arọ nke batrị acid na-eduga.
4. Elu nchekwa: LiFePO4 (LFP) bụ ụdị batrị lithium kachasị dịrị nchebe na ụlọ ọrụ ahụ.
5. Green ike: Enweghị ikike ọ bụla na gburugburu ebe obibi.
Ozi Ahịa na Akụkọ
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, isiokwu banyere nchebe gburugburu ebe obibi dọtara mmasị dị ukwuu. Typesdị ike ụgbọ mmiri na-eji nwayọọ nwayọọ na-agbanwe site na ike ọkụ ọkụ na ike obere carbon. Omume nke eletrik na-eji nwayọ na-abawanye, ọ bidola ịkwalite ma tinye ya n'ọrụ n'ụgbọ mmiri.
Shipsgbọ mmiri eletriki nwere uru nke nchekwa gburugburu ebe obibi, mmetọ ikuku, nchekwa na ọnụ ala ojiji, yana ụgwọ ọrụ ha dị ala karịa mmanụ dizel na ụgbọ mmiri LNG. Tụkwasị na nke a, ụgbọ mmiri eletrik dị mfe na nhazi, na-arụ ọrụ, ma na-akwụ ụgwọ mmezi, na-eme ka ha dabara adaba maka ọnọdụ gburugburu ebe obibi n'ọdịnihu.
Shipsgbọ mmiri eletrik kwesịrị iburu ọnụ ọgụgụ buru ibu nke batrị, ma nwee ihe ndị dị elu maka ọnụego nhapu batrị, okirikiri, na ụgwọ.
N'ihe banyere ụdị nhọrọ batrị, ma e jiri ya tụnyere batrị acid-lead, batrị lithium iron phosphate nwere uru pụtara ìhè n'ihe gbasara nchekwa, njupụta ike, na arụmọrụ okirikiri. Otú ọ dị, a na-eji batrị lithium iron phosphate ugbu a n'ọtụtụ ebe na bọs ọhụrụ na ebe nchekwa nchekwa. Batrị lithium iron phosphate ejiri na ụgbọ mmiri eletrik ga-enwe nkwenye teknụzụ ndị ọzọ, chọrọ nkọwa siri ike na ọnụahịa ngwaahịa dị elu.
Lithium iron phosphate ike batrị ike kacha mma yana arụmọrụ zuru oke n'ihe gbasara nchekwa, okirikiri na ọnụego bụ isi. Ma dịka ọnụọgụ batrị lithium iron phosphate eji mee ihe n'ọhịa nke ụgbọ mmiri eletrik na-abawanye n'ọdịnihu, ọnụahịa nke ngwaahịa ga-egosi usoro mgbada.
N'ọdịnihu, nsogbu batrị lithium ụgbọ mmiri ga-elekwasị anya na ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri, ụgbọ mmiri na-ahụ anya, ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri dị n'ime obodo, ọdụ ụgbọ mmiri dị na obodo ndị dị n'ụsọ osimiri, wdg. Largefọdụ ụgbọ mmiri buru ibu ma dị obere na-eji batrị lithium kama nke acid acid. , nke ga-eme ka ojiji nke batrị lithium dị ngwa n'ime ụgbọ mmiri.
Nke gara aga: Tdị mkpọ Bolt ụdị 3.2V 10Ah LiFePO4 batrị batrị maka inye ike na nchekwa nchekwa
Osote: China emeputa 19 inch ogbe arịọnụ 48V 50Ah lithium ion batrị (LiFePO4) maka nkwukọrịta